Marka aad salaanta Islaamka ee qaaliga ah guddoontaan kaddib, waxan aad iyo aad uga xanuunsaday/ xanuun sadaa mar kasta oo aan arkana dhulku ila wareegaa; fal aad u xun oo dalkeenna laga caadeystay oo beryan dam bana faraha ka sii baxaya -gaar ahaanna xilligan lagu jiro ololaha doorashooyinka is-ku-sidkan.
Falkaasi oo dadnimada iyo diintaba ku xumi, waa Fulka ama qoolka ubaxa ah ee ay haweenka iyo gabdhaha yar ya ri qoorta u galiyaan ragga murashaxiinta ah iyo weliba ragga madaxda ah ama mudanta kalaba!
Mudanayaal, idinka oo sharaf leh, arrintaa aan soo tilmaamay oo xishood la'aan ah, isla markaasina shuqul gaal aad ah; waxa loo baahan yahay, in si degdeg ah looga hawlgalo oo loo joojiyo.
Ujeedada aan warkan idiinku soo gudbiyeyna ma aha, in fulka ama qool ubaxeedka la mamnuuco ama joojiyaba, wa Ujeeddo: Wax-ka-qabasho Ujeeddo: Wax-ka-qabasho xanse ujeedaa, in la joojiyo hab dhaqankan haweenku ragga caasha saarayaan marka ay ubaxa u gelinayaan!
Maxaa diidaya, in wiilashu ragga ubaxa u galiyey? Gabdhuhuna dumarka u sudhaan ubaxa qoorta?Miyaanse rag ga gacanta loogu dhiibi karin, inta haweenku luqunta u sudhayaan!??